Madaxweyne Farmaajo oo safiirka Shiinaha wax ka weydiiyay xiriirka Taiwan iyo Somaliland - Calanka.com
Calanka.com » Dibedda » Madaxweyne Farmaajo oo safiirka Shiinaha wax ka weydiiyay xiriirka Taiwan iyo Somaliland
Madaxweyne Farmaajo oo safiirka Shiinaha wax ka weydiiyay xiriirka Taiwan iyo Somaliland
July 4, 2020 ( July 4, 2020 ) 0 Comments 0 Views2
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa muujiyay sida uu u diiddan yahay xiriirka dhawaan ay yeesheen Taiwan iyo maamulka Somaliland.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in Muqdisho iyo Beijing ay dhowrayaan madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee labadooda dal, kadib kulan uu madaxweynaha la qaatay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian.
Danjire Jian ayaa dhankiisa sheegay in dalkiisa ay ka go’an tahay “dhowrista Qarannimada iyo Midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.”
Shiinaha ayaa ka carooday tallaabada ay Taiwan xiriirka kula sameysay Somaliland, kadib markii ay wakiil usoo dirsatay Hargeysa.
Taipei iyo Hargeysa aya sheegay inay iska kaashan doonaan arimaha caafimaadka, beeraha iyo macdanta.
Somaliland ayaa tan iyo 1991 raadineysay aqoonsi, mana jiro dal qura ah oo u aqoonsaday inay ka madaxbannaan tahay Soomaaliya.
Taiwan ayaa dhinaca kale waxaa aqoonsaday 15 waddan, inkastoo tan iyo markii ay xukunka la wareegtay madaxweyne Tsai Ing-wen 2016 ay xiriir diblomaasiyaseed u jareen 7 kamid ah dalalkaasi kadib cadaadis uga yimid Shiinaha.
Inkastoo Taiwan ay isu aragto dal madaxbannaan oo dhaqaalo ahaanna isku filnaaday, ayaa dhanka kale Shiinaha waxa uu tilmaamaa inay kamid tahay dhulkiisa, isla markaana uu maalin uun qabsan doono xitaa haddii ay noqoto qaab muquunin ah.
JARMALKA: Kaniisad u ogolaatay muslimiinta in ay masjid ahaan ugu tukadaan sababo la xiriira cudurka corona
Kaniisad ku taal caasimadda dalkaasi Jarmalka ee Berlin ayaa albaabada u furtay dadka muslimiinta ah si ay ugu adeegsadaan masjid ahaan sababo la...
Madaxii shaqaalaha madaxweynaha Nigeria oo u dhintay cudurka coronavirus
Waxaa dalkaasi Nigeria cudurka coronavirus ugu geeriyooday madixii shaqaalaha madaxweynaha dalka Nigeria kaas oo lagu magacaabay Abba Kyari . Masuulkan ayuu cudurka COVID-19 haleelay...
SAWIRRO: Gabar swedish ah oo dhigatay xaflad dhimasho – mudanayaal iyo marwooyin mar dhow waan dhimanayaa!
Gabar kasoo jeeda magaalada Stenungsund ee dalkaasi Swedan ayaa dhawaan dhigatay xaflad dhimasho kaddib markii lagu wargeliyay in ay dhawaan u dhiman doonto...
Maxkamad sare oo Turkish ah ayaa maanta go’aamisay in laga noqdo xeer hore oo Hagia Sophia ka dhigay madxaf, taasi oo dhabbaha u...